कांग्रेसमा किचलो, मन्त्रिपरिषद् विस्तार कहिले ? - HAMRO YATRA
कांग्रेसमा किचलो, मन्त्रिपरिषद् विस्तार कहिले ?
काठमाडौं, १० साउन । नेपाली कांग्रेसबाट मन्त्रीहरु बन्नेहरुको नाम लगभग टुंगिए भनिए पनि भागवण्डामा कुरा नमिलेपछि अन्तिम समयमा आएर मंगलबार हुने भनिएको मन्त्रिपरिषद विस्तार रोकिएको छ ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मंगलबार नै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने तयारी गरेका थिए तर भागबण्डा नमिलेपछि रोकिएको हो । सरकारको नेतृत्वकर्ता दल कांग्रेसले १३ वटा मन्त्रालय लिने सहमति सत्ता साझेदार दलहरुबीच भएको छ । कांग्रेसबाट उपप्रधानसहित शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठ, अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र श्रममन्त्री फर्मुल्लाह मन्सुर भइसकेका छन् ।
बाँकी रहेका १० मन्त्री मध्ये देउवा पक्षबाट चार, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षबाट चार जना हुनेछन् भने कृष्ण सिटौला समूह र खुमबहादुर खड्का समूहबाट एक–एक मन्त्री दिने तयारी प्रधानमन्त्री देउवाले गरेका थिए । तर पौडेलले आफ्नो भागमा पाँच मन्त्रालय मागेपछि विवाद भएको थियो । पौडेलले आफ्नो भागमा भौतिक योजना मन्त्रालय पनि हुनुपर्ने अडान लिएपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तारको काम रोकिएको छ ।
यसअघि कांग्रेस निकट श्रोतका अनुसार देउवा पक्षबाट मीन विश्वकर्मा, अर्जुन जोशी, वीरबहादुर बलायर र अम्बिका बस्नेत मन्त्री हुने भएका थिए । पौडेल समूहबाट बलबहादुर केसी, रामकृष्ण यादव, राजन केसीको नाम पक्का गरिएको थियो । यस्तै सरिता प्रसाई र कमला पन्तको पनि सम्भावना छ । यस्तै सिटौला समूहबाट भीमसेनदास प्रधान र खुमबहादुर समूहबाट मोहनबहादुर बस्नेतको नाम लगभग टुंगिएको थियो ।
यो सरकार विस्तारमा माओवादीका मन्त्रीहरु पनि समेटिनेछन् । माओवादीले मन्त्रीहरुको नाम टुंगो लगाइसकेका भनेको छ तर, अहिलेसम्म सार्वजनिक गरेको छैन । नौ मन्त्रालय पाएको माओवादीबाट उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री कृष्णबहादुर महरा, गृहमन्त्री जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ र शहरीविकास मन्त्री प्रभु साह भइसकेका छन् ।